Izindululo ezintsha zolwandle lweWomen'Secret | IBezzia
UMaria vazquez | 21/07/2021 18:00 | Ndinxiba ntoni
Ngaba sele uzonwabele iiholide zakho okanye azisekho? Ukuba awukayivali ityesi, ungongeza ezinye kuyo. izindululo malunga nonxweme lwabasetyhini. Izindululo zokukhanya kunye nezintsha zokuzonwabisa ngokudibanisa elwandle kunye nokuhamba ekutshoneni kwelanga.
Masijongane nayo, xa sikwiholide sihlala sisebenzisa iziqwenga ezifanayo, nokuba sipakishe zingaphi. Ezo siziva sikhululekile kwaye sithandeka kuzo. Izambatho, ngokubanzi, ezilula okanye ngeepateni ezichwayitileyo njengaleyo iboniswe yimfihlo yabasetyhini kuhlelo lwayo lwamva nje:
1 Ukuhamba emva kwemini
2 Mnyama kwiziseko
Ukuhamba emva kwemini
Ukuhlwa ngokuhlwa kwaye unqwenela ukuhambahamba ukuze ufumane iikona ezintsha okanye ukonwabele nje ubushushu obumnandi. Iimeko apho imfihlo yabaseTyhini isimema ukuba sizenze sihlale kamnandi ngokudibanisa iimpahla ezinqunyulwe ngokubanzi kunye nedrape ethambileyo esinokuthi sithathe ngaphakathi nangaphandle kwekhaya.
Iibhulukhwe ezinde kunye neebhulukhwe ezimfutshane, izikipa zomqhaphu kunye neekisoles zoqobo zizalisa ezi nkangeleko. Izambatho ezingenanto kunye ipatheni kunye neentyatyambo, imithi yesundu kunye nezilwanyana kwi-garnet yokuthambisa, iithoni eziluhlaza kunye neecru. Kwaye ukugqibezela iimpahla akukho kunqongophala kwezixhobo: iipakethi ze fanny, Iingxowa zeraffia, iiflopsi…
Umnyama nomhlophe zi protagonists zendlu yokupapasha abaNtsundu kwiziseko. Lo mxube ungaze usilele uboniswa ngeendlela ezahlukeneyo nge ukuprintwa kweentyatyambo ezincinci Ukuthopha ngokuncomekayo, umbala omnye wokuqubha kunye neebikini kunye neeT-shirts ezineSnoopy njengomntu ophambili.
Yonke into ngoku kwaye kufuneka sithathe ezo zakudala sihlala silungile ngazo. Inkqubo ye- iimpahla zokudada ezimhlophe okanye ezimnyama Ukudityaniswa kwezambatho ezifanayo ezivela kwingqokelela yeempahla zaselwandle (iibhulukhwe ezimfutshane, i-t-shirts ...) baba lukhetho olufanelekileyo kusasa ekuseni elunxwemeni. Ngaba ungaphezulu kwebhikini? Uyakufumana kwakhona, kudityaniswe nezikipa eziprintiweyo ezinemigca okanye iilokhwe ezilula ezinoshicilelo lweentyatyambo.
Ngaba uyazithanda izindululo ezitsha zolwandle lwabasetyhini?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » fashion » Ndinxiba ntoni » Izindululo ezintsha zolwandle lweWomen'Secret